> Resource > Lugood > Sidee loo Diiwaan Pandora in Lugood
Ma doonaysaa in lagu badbaadiyo Pandora in Lugood for loo maqli offline si aad u ciyaari karaa Pandora in Lugood effortlessly sida play Lugood music? Ama aad qorshaynayso in ay dhagaystaan ​​music Pandora aad aaladaha Apple la qaadi karo sida iPod, iPhone, iPad iyo iwm u soori u tegayaa?
Waxaad tahay eey oo nasiib ah. Halkan, waxaan la wadaagi doonaa habka ugu fudud oo ugu wanaagsan ee lagu caawiyo in aad sii qulquli Pandora dhex Lugood. Dareen xiiso? Dhammaan xaq, aynu sii.
Habka waxaan la qaato waa in aad isticmaasho ah oo taariikhqorihii audio smart. Waxaan dhicin inuu yidhaahdo, Streaming Audio Recorder waa taariikhqorihii ugu fiican audio ee aan abid loo isticmaalo. Waxaa si fudud u soo bixi kartaa music Pandora la dhamaystiran macluumaad la xiriira, sida fanaaniinta, daboolida album iyo magacyada iwm, iyo wareejiyo Pandora music tayo asalka ah si Lugood kaliya la click hal-fudud. Hadda, fadlan raac hoose saddex tallaabo inay sameeyaan Pandora in ay diinta ka Lugood.
1 Ku rakib iyo abuurtaan Streaming Audio Recorder
Download iyo rakibi Streaming Audio Recorder ah. Markaas, bilowno smart app.
2 Bilow si ay u qoraan Pandora
Marka aad gashid interface ugu weyn ee Streaming Audio Recorder, riix "Record" button on geeska bidixda ah ee kore. Open Pandora.com, ogaato iyo ciyaaro song aad rabto si ay u qoraan.
Waa ok. Waxaad ka arki kartaa taasi oo taariikhqorihii audio smart ayaa bilaabay in ay u qoraan song Pandora ah. Si aad u joojiso duubo marka ciyaareed gabaygan la dhammeeyo, waxaad ka dhacay karaa "Diiwaanka" badhanka mar labaad.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad sameyn kartaa saacad ay bixiyaan app si astaysto markii bilowga duubo iyo dhamaadka-duubay iyo ha toos ah hoos u xidhay ka dib markii lagu duubo la sameeyo.
3 Play Pandora on Lugood
Taga laybareeriga this app ee, dooro kuwa aad rabto in aad soo dhoofsadaan, ka dibna ku dhufatey "Add to Lugood" button. Waxaad ka heli doontaa gabayadii Pandora diiwaan ay ku kaydsan yihiin in playlist la odhan jiray "SAR" in Lugood.
Hadda, waxaad isticmaali kartaa Lugood inuu u ciyaaro, kuwaas oo heeso Pandora mar walba. Oo haddii aad rabto in aad u hagaagsan, kuwaas oo files qalabka Apple, waxaad ka heli doontaa ma ahan wax aan macquul aheyn wax ka badan. Just waxay isku dayaan.